တစ်ခါ တောင်းပြီး ဘီ.. အခု ဒုတိယ မြောက် — MYSTERY ZILLION
တစ်ခါ တောင်းပြီး ဘီ.. အခု ဒုတိယ မြောက်
ISA sever မှာ ဗိုင်းရပ် မ၀င်နိုင်အောင် filter ခံ ထားလို ့၇တယ် လို့MZ က တစ်နေရာ မှ
ဖတ်ပြီးရတယ်... ပြီးတော ့ပို ့စ် က ဘာနားမှန်းသိတော ့ဘူး.. အခု ကျွန်တော် လက်ရှိ သုံးနေတာ က
window 2003 sever ကို ISA sever 2004 တင်ပြီး အသုံးပြုနေတာ ပါ ..
လိုင်းကတော့Bagan .. brodband ပါ... filter ခံ တဲ ့အကြောင်းကို သေသေချာချာ သိချင်လို ့
ပါ.. နောက်ပြီး Bagan နဲ့.. အိုင်ပီ တွေ လဲ သိချင် ပါ သေးတယ် ခင်ဗျာ...
ISA Server မှာ Virus မ၀င်အောင် antivirus သုံးရမယ် မဟုတ်လား။ Server မှာ Anti Virus တစ်ခုခု တင်ထားပြီး virus update ကို latest updates လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် Virus ရန်က ကင်းမယ်လို့ထင်တယ်။ Antivirus ကိုလည်း ရိုးရိုး Personal သုံးတဲ့ဟာထက်စာရင် Server အတွက် သီးသန့်ထုတ်တဲ့ ဗားရှင်းသုံးရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တာပဲ။
Virus ရန်ကို ကင်းရှင်းစေလိုတယ်ဆိုရင်တော့ Linux Proxy Server ပဲ သုံးလိုက်ပါ။ Squid ပေါ့။
why dun you guys try with untangle???:106:
for my opinion, untangle is rock coz i'm linux crazy:D
အင်း အင်း ဟုတ်တယ်ဗျ။ အဲဒီ untangle ကို သုံးဗျ။ ကျွန်တော်လည်း ဟိုနေ့ကမှ သိတာ။ အဲဒါလေးကို စမ်းကြည့်ပါလား။
untangle also has NT virus n u also can prevent virus frm the external...!
for my opinion, although smoothwall is rock, it's sensitive. i also used vyattan. it also rock. but, i prefer untangle more.
Linux Proxy Server မှာ virus မကိုက်အောင်ကာကွယ်နိုင်တာမဟုတ်ပါ။Bagan သည် Linux သုံးပါသည်။ virus ပေါလိုက်သည်မှာလူတိုင်အသိပါ။ virus မကိုက်အောင် antivirus သုံးရမှာပါ။
ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျာ သဘောကတော့ တဲပုတ်နဲ့ တိုက်အိမ်လိုပေါ့။ ဘယ်သူခိုးက တဲပုတ်ပေါ်တက်ခိုးမှာလဲ။ သူခိုးမခိုးတာနဲ့ပဲ တဲပုတ်က လုံခြုံတယ်လို့ပြောလို့မှ မရတာ။ မအိ ပို့ဖတ်ပြီးပြောတာနော်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဖဲ့နေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ အဲဒီလိုထင်ရင်တော့ very sorry ငှက်ပျောသီးနော်။